Riverdale : Season2( 2017 ) - Myanmar Asian TV Channel
အကုန်လုံး Riverdale Season 1 ကို ကြည့်ပြီးကြမယ်ထင်ပါတယ် … အခု Season2လေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် …
Season 1 ရဲ့ နောက်ဆုံးပိုင်းလေးမှာ ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကို ကြည့်ပြီးသူ အားလုံးလည်း သိပြီးကြရော နေမှာပေါ့ …
အဲ့တော့အခု Season2အစကို အဲ့နေရာကနေ ဆက်ထားပါတယ် …
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မှောင်မိုက်မှုတွေ လွှမ်းမိုးလာတဲ့ Riverdale မြို့လေးက ဘယ်လို ကံတရားတွေ
ဘယ်သူတွေ ဘာတွေဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုတွေ
ကြုံတွေ့ရဦးမလဲ ? ဆိုတာကိုတော့ ဘာသာပြန်သူ ကျွန်မနဲ့ တူတူလိုက်ကြည့်ကြပါလို့ …
ကိုယ်လည်း ဘာသာပြန်ရင်းကြည့်တာဆိုတော့ ဘာဖြစ်မှာလည်းကို ကြိုမပြောတတ်ဘူး :3
အဆုံးထိတူတူကြည့်ကြတာပေါ့ … အဲ့တော့လည်း ဇာတ်ကားကတော့ ရိုးမသွားပဲ ပိုကောင်းလာတာပေါ့နော် … ( သပ်သပ်အပျင်းတစ်လို့ reason ရှာတာ :3 )
ကိုယ်လည်း ကြိုးစား ဘာသာပြန်ပေးထားတယ် … အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါလို့ … မေတ္တာ ရပ်ခံချင်တာလေး တစ်ခုကတော့ ဘာသာပြန်သူ ကျွန်မလည်း စာမေးပွဲကနီးလာနေပြီဆိုတော့ နောက်ကျမယ်လို့နော်
( Exam က တကယ်တော့ ၃ လ ပိုင်း ၂၀ ရက်နေ့မှ … သပ်သပ် အပျင်းတစ်နေတာ … အခုတစ်ပိုင်းကို တစ်ညတည်း ရေးထားတာ … ညပေါင်း ၂၀ မှာ ၁၀ ည ပဲ ဆက်တိုက်ရေး … အခုပြပြီးတဲ့ အပိုင်းအထိကို မှီနေပြီ :3 )
ခါတိုင်းလည်း နောက်ကျနေကြပါပဲ xD … ( မဆိုးပါဘူး … ကိုယ့်အခြေအနေ ကိုယ်တော့ နားလည်သဘောပေါက်ထား :3 )
အဲ့တော့ ဘယ်နေ့တင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကြိုမပြောတော့ဘူးနော် … ( ကြည့်မယ့်သူတွေအစား ကိုယ်ပါ လည်ပင်းရှည်ချင်လာပြီ :3 )
ပြီးအောင်တော့ ရေးသွားမှာပါ စိတ်ချပါ … စောင့်နေတဲ့ သူတွေကိုလည်း အားနာပါတယ် … ( ပြီးမှ . 🎵 အို ပုံပြင်လေးရယ် ဘယ်ရောက်သွား … အနေဝေး အိပ်မက်များ 🎵 … အဲ့ သီချင်းလိုဖြစ်မှာ :3 )
P.S – Translator ပေးသော Review ပေါ်တွင် ကွင်းစကွင်းပိတ်များ Ziven လိုက် ဖြည့်စွက်သည် ။
Season 1 ပြန် download လုပ်ရန် >>>> Riverdale Season 1